Taageerrada Hay’adaha Amniga ee Dowladda Federaalka ah | UNSOS
04:40 - 18 Jan
Bisha Nofeembar 2013, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa asaga oo u marayo Qaraarka caddadkiisu yahay 2124, UNSOS u xil saartay in taageerro dhinaca saadka ah ay siiso cutubyada Ciidanka Xoogga Soomaaliya oo howlgallo wadajir ah kula jiro AMISOM. Naqshadda Howlgallada AMISOM ee haatan ayaa waxaa ay ku koobtay tiro 10,900 oo ka mid Ciidanka Xoogga Soomaaliya in ay helayaan taageerradan.
Dhowr shuruudo ayaa ah in la buuxiyo si ay ciidamada Xoogga Soomaaliya ay u qalmaan in ay helaan taageerrada UNSOS, sida dhammeystirka tababarka khasabka ah ee ku aaddan Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay iyo Shuruucda Caalamiga ee Bani’aaddinimada iyo xarunta dhexe ee Ciidanka Xoogga Soomaaliya ay diiwaangeliso ayna baarto. Ilaa iyo 28-da Noofembar 2014, 7,995 oo ka mid ah Ciidanka Xoogga Soomaaliya ayaa buuxiyay shuruudahani hordhaca ah, UNSOS-na waxaa ay siisaa cunno, biyo iyo shidaal (meelaha qaar), teendhooyin, gaadiid iyo taageerro caafimaad.
Taageerrada UNSOS waxaa lagu maalgeliya tabarrucaadda Sanduuqa Ciidanka Xoogga Soomaaliya, kaas iyo ilaa iyo hadda ku soo xarootay lacag dhan $13.55 milyan oo laga helay UK, US, Talyaaniga iyo New Zealand.